Iloprost - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Iloprost
Generic Name: Iloprost Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Iloprost ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
အဆုတ်တွင်း သွေးဖိအားများပြားခြင်း (သွေးပေါင်တက်ခြင်း)ကိုကုသဖို့အတွက် Iloprost ကိုအများဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုပိုမိုပြုလုပ်လာနိုင်စွမ်းရှိစေဖို့ Iloprost ကကူညီပေးနိုင်တဲ့အပြင်အသက်ရှုမဝခြင်း၊ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းအစရှိတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုလည်းသက်သာစေပါတယ်။Iloprost ဟာအဆုတ်တွင်းမှာရှိတဲ့ သွေးလွှတ်ကြောတွေနဲ့ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့အခြားနေရာတွေမှာရှိတဲ့ သွေးကြောတွေကို ပြေလျော့စေ၊ကျယ်စေတဲ့အတွက် သွေးအသွားအလာကိုပိုကောင်းစေခြင်းအားဖြင့်အာနိသင်ပြပါတယ်။Iloprost ဟာ သွေးကြောကျယ်စေတဲ့ ဆေးအမျိုးအစားတခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ရှုပါ။ ဒီဆေးဟာဖန်ပုလင်းလေးနဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးပုလင်းကိုဘယ်လိုဖွင့်ပြီးအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကို သေချာစွာဖတ်ရှုလိုက်နာပါ။Nebulizer လို့ခေါ်တဲ့ရှူဆေးစက်တမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးဒီဆေးကိုရှူသွင်းရမှာပါ။Nebulizer ကိုဘယ်လိုစနစ်တကျအသုံးပြုပြီး ဆေးကိုရှူသွင်းမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ဆရာဝန်ကိုအသေးစိတ်မေးမြန်းပါ။ ကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်းကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် Nebulizer စက်ကိုဘယ်လိုစနစ်တကျသန့်စင်မလဲဆိုတာကိုလည်းသိထားရပါမယ်။
ဆေးရည်ကိုအသုံးမပြုခင်အရောင်ပြောင်းလဲခြင်းရှိမရှိသို့မဟုတ်အမှုန်တွေပါနေခြင်းရှိမရှိဦးစွာစစ်ဆေးရပါမယ်။ အရောင်ပြောင်းနေရင်သို့မဟုတ်အမှုန်တွေပါနေရင်လုံးဝအသုံးမပြုရပါဘူး။ ဒီဆေးကိုNebulizer စက်ထဲမှာအခြားသော ဆေးတွေနဲ့ ရောနှောခြင်းမပြုရပါဘူး။ ဒီဆေးကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပါးစပ်ကနေရှူသွင်းရမှာဖြစ်ပြီးတနေ့ကို၆ – ၉ကြိမ်ရှူသွင်းရပါမယ်။ တကြိမ်နဲ့တကြိမ်အကြားအနည်းဆုံး၂နာရီ ခြားရပါမယ်။ ဒီဆေးရည်ကို သောက်သုံးခြင်းလုံးဝမပြုရပါဘူး။ ဆေးကိုအရေပြားဒါမှမဟုတ်မျက်စိနဲ့မထိပါစေနဲ့။ အကယ်၍ထိမိခဲ့ရင်ထိမိတဲ့နေရာကို ရေနဲ့အမြန်ဆေးပါ။ သင့်ရောဂါအခြေအနေ၊ဆေးကိုတုံ့ပြန်မှုတို့အပေါ်မူတည်ပြီးသုံးစွဲရမယ့် ဆေးပမာဏကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးရဲ့အကျိုးအာနိသင်အပြည့်အဝရရှိစေဖို့ ဆေးကိုပုံမှန်သုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တနေ့တာရဲ့တူညီတဲ့အချိန်မှာသတ်သတ်မှတ်မှတ်သုံးစွဲခြင်းအားဖြင့် ဆေးသုံးစွဲဖို့ မေ့တာမျိုးမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ သင်သုံးစွဲနေကျ Nebulizer စက် ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ ဆေးသုံးစွဲမှုမပျက်ကွက်စေဖို့အတွက်အရံ Nebulizer တခုလည်းအသင့်ရှိထားသင့်ပါတယ်။ သင့်ရောဂါအခြေအနေမသက်သာရင်ဒါမှမဟုတ်ပိုဆိုးလာရင်ဆရာဝန်ကိုအသိပေးပါ။
ဆေးအများစုမှာအခန်းအပူချိန်တွင်သိုလှောင်ထားနိုင်ပါတယ်။Iloprost ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Iloprost ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင်သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။Iloprost ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကိုကလေးတွေ၊အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။Iloprost ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။ ဆေးဝါးအများစုကို ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ ရေခဲအောင်သိမ်းဆည်းခြင်းတော့မပြုလုပ်ရပါ။Iloprost ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Iloprost အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Iloprost နဲ့ဓါတ်မတည့်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားသောဓါတ်မတည့်ခြင်းတွေရှိနေရင်ဆရာဝန်ကိုကြိုတင်အသိပေးပါ။ ဒီဆေးမှာပါဝင်တဲ့ဓါတ်ပစ္စည်းတွေဟာဓါတ်မတည့်ခြင်းပြဿနာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ သင့်ရောဂါရာဇဝင်အပြည့်အစုံကိုဆရာဝန်အားကြိုတင်အသိပေးပါ၊အထူးသဖြင့် သွေးပေါင်ကျခြင်း၊အသည်းပြဿနာ၊ကျောက်ကပ်ပြဿနာများရှိခြင်း၊သွေးဆိုင်ရာပြဿနာများရှိခြင်း၊အခြားသောအသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများရှိခြင်း (ဥပမာပန်းနာရင်ကျပ်) စတဲ့အခြေအနေတွေမှာပေါ့။ ဒီဆေးဟာသင့်ကိုငိုက်မျဉ်းထိုင်းမှိုင်းစေပါလိမ့်မယ်။ ကားမောင်းခြင်း၊စက်ကိရိယာများကို မောင်းနှင်ခြင်းအပါအဝင်လန်းဆန်းနိုးကြားနေစေဖို့လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကို ဆေးအာနိသင်ရှိနေချိန်မှာမပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။ အရက်ကိုလည်းတန်သင့်ရုံသာ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေလိုအပ်မှသာဒီဆေးကိုသုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ ဆေးရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ ဒီဆေးဟာမိခင်နို့ထဲမှာပါဝင်လာခြင်းရှိမရှိမသိရသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်သင့်အနေနဲ့ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးမယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့ ဦးစွာတိုင်ပင်ရပါမယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Iloprost ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့်ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင်အသုံးပြုလျှင်ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏သတ်မှတ်ချက်အရကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင်ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။)
Iloprost ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ပျို့အန်မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ဝမ်းလျှောခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊မူးဝေထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊မေးရိုးနာခြင်း၊မေးရိုးကြွက်သားများအကြောဆွဲခြင်း၊မျက်နှာနီရဲခြင်း၊အိပ်မပျော်ခြင်းစတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပိုဆိုးလာရင်ဒါမှမဟုတ်အချိန်ကြာမြင့်စွာဆက်လက်ရှိနေရင်ဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းအသိပေးရပါမယ်။ မူးဝေထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊သတိလစ်ခြင်းစတာတွေကို လျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်ထိုင်နေရာ၊လှဲနေရာကထတဲ့အခါဆတ်ခနဲမထဘဲ ဖြည်းညင်းစွာထရပါမယ်။ ဆေးရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေထက်ပိုမိုများပြားသာလွန်တယ်လို့သင့်ဆရာဝန်ကယူဆတဲ့အတွက်ဒီဆေးကိုသုံးစွဲစေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအမှတ်ရပါ။ ဒီဆေးကိုသုံးစွဲသူအများစုမှာတော့ ပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်လေ့မရှိပါဘူး။ အသက်ရှုလျှင်တရွှီရွှီမြည်ခြင်း၊ကိုယ်အလေးချိန်ရုတ်တရက်တက်လာခြင်း၊အသက်ရှူရပိုခက်လာခြင်း၊ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊သတိလစ်မေ့လဲခြင်းအစရှိတဲ့ရှားပါးပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ပေါ်ပေါက်လာရင်ဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားရပါမယ်။။ ဒီဆေးကြောင့်အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ဓါတ်မတည့်ခြင်းမျိုး ဖြစ်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အနီစက်များထွက်လာခြင်း၊ယားယံခြင်း၊ရောင်ရမ်းခြင်း (အထူးသဖြင့်မျက်နှာ၊လျှာ၊လည်ချောင်းစသည်)၊အလွန်အမင်းငိုက်မျဉ်းခြင်း၊အသက်ရှုရခက်ခြင်းစတဲ့ ပြင်းထန်စွာဓါတ်မတည့်ခြင်းလက္ခဏာတွေပေါ်ပေါက်လာရင်အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုကိုအမြန်ဆုံးခံယူရပါမယ်။ ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုခံစားရမှုမှာတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကသင်၏ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Iloprost နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Iloprost ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Iloprost နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Iloprost ကအစားအသောက်ဒါမှမဟုတ်အရက်သေစာနဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့အစားအသောက်၊အရက်သေစာတွေနဲ့ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Iloprost နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Iloprost ဟာသင့်သွေးပေါင်ချိန်ကိုကျစေပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်အနေနဲ့အခြားသော သွေးကျဆေးတွေကိုလည်းအသုံးပြုဖို့ညွှန်ကြားကောင်းညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ် (ဥပမာ furosemide ကဲ့သို့သောဆီးဆေးများ၊captopril ကဲ့သို့သော ACE inhibitors အုပ်စုဝင်ဆေးများ၊nifedipine ကဲ့သို့သော calcium channel blockers အုပ်စုဝင် ဆေးများ၊နိုက်ထရိတ်ကဲ့သို့သော သွေးကြောကျယ်စေသည့် ဆေးများစသဖြင့်)။ သွေးခဲခြင်းကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် သွေးကျဲဆေးတွေကိုသုံးစွဲဖို့လည်းသင့်ဆရာဝန်ကညွှန်ကြားကောင်းညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ် (ဥပမာ warfarin)။ အကယ်၍သင့်အနေနဲ့ သွေးကျဲဆေးတွေကိုပါသုံးစွဲနေရတယ်ဆိုရင်တော့ သွေးယိုစီးနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ပိုများပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေကို ထောက်လှမ်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်သင့်ဆရာဝန်အနေနဲ့ တောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်တကူ သွေးယိုစီးခြင်း၊မူမမှန်စွာ သွေးယိုစီးခြင်း၊ပြင်းထန်စွာငိုက်မျဉ်းခြင်း၊သတိလစ်မေ့မျောခြင်းစတဲ့ ပြဿနာတွေ ပေါ်ပေါက်လာရင်ဆရာဝန်ကချက်ချင်းအသိပေးပါ။Iloprost ဟာသင့်ရဲ့နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Iloprost ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အဆုတ်သွေးကြောများအတွင်း သွေးဖိအားများခြင်းအတွက် :
ကနဦးဆေးပမာဏ : 2.5 mcg ကိုပါးစပ်ကနေတကြိမ်ရှူရပါမယ်။ ဒီပမာဏကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်ဆိုရင်5mcg ပမာဏအထိတိုးပေးရမှာဖြစ်ပြီးဒီပမာဏမှာထိန်းထားရပါမယ်။
ဆက်လက်ပေးထားရမယ့်ပမာဏ : 2.5 သို့မဟုတ်5mcg ပမာဏကိုတနေ့၆ – ၉ကြိမ်ထိရှူနိုင်ပါတယ်။ နိုးနေစဉ်ကာလမှာ၂နာရီခြားတခါထက်ပိုမရှူရပါဘူး။ သုံးစွဲရမယ့်အကြိမ်အရေအတွက်ကတော့လူနာတဦးချင်းစီရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ခံနိုင်ရည်ပေါ်မူတည်ပါတယ်။
အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်တဲ့ပမာဏ : တနေ့ကို 45 mcg (တကြိမ်သုံးစွဲလျှင်5mcg ပမာဏနဲ့တနေ့၉ကြိမ်)။
မှတ်ချက် : အပေါ်သွေး၈၅ mmHg ထက်နည်းတဲ့လူနာတွေမှာ ဆေးစတင်သုံးစွဲခြင်းမပြုရပါဘူး။
ကျောက်ကပ်မကောင်းသူများ (ကျောက်ကပ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်ရန်မလိုသူများ) : ဆေးပမာဏကိုအထူးတလည်ချိန်ဆဖို့မလိုပါ။
အသည်းအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ဆေးပမာဏချိန်ဆခြင်း :
Child-Pugh Class A အသည်းမကောင်းခြင်း : တိကျခိုင်မာသောအချက်အလက်များမသိရှိရသေးပါ။
Child-Pugh Class B သို့မဟုတ် C အသည်းမကောင်းခြင်း : ဆေးတကြိမ်နဲ့တကြိမ်အကြားမှာအချိန်များများခြားခြင်း (ဥပမာ၃ – ၄နာရီခြားခြင်း) – လူနာရဲ့တုံ့ပြန်မှုအပေါ်မူတည်ပါတယ်။
သက်ကြီးရွယ်အိုများ : အသည်း၊ကျောက်ကပ်သို့မဟုတ်နှလုံးဆိုင်ရာပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ချေများတဲ့အပြင်အခြားသော ရောဂါများရှိနေခြင်း၊အခြားသော ဆေးဝါးကုသမှုများကိုလည်းခံယူနေရခြင်းစတဲ့အနေအထားတွေရှိနေနိုင်တာကြောင့် ဆေးပမာဏသတ်မှတ်ရွေးချယ်တဲ့အခါသတိကြီးစွာထားပြီး ရွေးချယ်ရပါမယ်။
-ပါးစပ်မှ ဆေးရှူသွင်းခြင်းအတွက် I-neb(R) AAD(R) စနစ်ကိုအသုံးပြုပါ။
-ဆေးသုံးစွဲတဲ့အခါအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဖို့အတွက် I-neb(R) AAD(R) စနစ် နောက်ထပ်တခုအရံရှိနေသင့်ပါတယ်။
-ရှူသွင်းရမယ့် ဆေးရည်တွေကိုအရေပြားသို့မဟုတ်မျက်စိနဲ့မထိပါစေနဲ့။ မြိုချခြင်းလည်းမပြုရပါဘူး။
-I-neb(R) AAD(R) စနစ်ထဲမှာတခြားဆေးတွေနဲ့မရောပစ်လိုက်ပါနဲ့။
-ဆေးပုလင်းထဲမှာပါဝင်တဲ့ ဆေးအားလုံးကို (မသုံးစွဲခင်အချိန်လေးမှာမှ) ဆေးထည့်တဲ့အကန့်လေးထဲကို ပြောင်းထည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
5 mcg ဆေးပမာဏမှာထိန်းသိမ်းထားသူတွေနဲ့ဒီဆေးကိုကာလကြာရှည်စွာထပ်တလဲလဲသုံးစွဲနေရသူတွေမှာအသုံးပြုဖို့အတွက် 20 mcg/mL ပြင်းအားပမာဏကိုအရံသင့်ထားထားရပါမယ်။
-ဒီလိုမျိုး 20 mcg/mL ပြင်းအားပမာဏကိုအသုံးပြုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့လူနာတွေမှာ ဆေးဒါဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိစေဖို့ ဆေးသုံးစွဲတဲ့ကာလကို လျှော့ချပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
-ဆေးစတင်သုံးစွဲနေချိန်မှာလူနာရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်း၊သွေးပေါင်ချိန်၊အသက်ရှူနှုန်း၊ဆီးသွားမသွားစတဲ့အရေးကြီးအချက်တွေကို သေချာစွာ စောင့်ကြည့်နေရပါမယ်။
-ဆေးရှူနည်းစနစ်မှန်ကန်စေဖို့ (အကြိမ်ရေမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးစွဲဖို့၊ဆေးပုလင်းကိုမှန်ကန်စွာဖွင့်ပေါက်အသုံးပြုတတ်ဖို့၊I-neb(R) AAD(R) စနစ်ကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုတတ်ဖို့၊စက်ကိုစနစ်တကျသန့်စင်တတ်ဖို့စသည်)အတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုအတိအကျလိုက်နာရပါမယ်။
-သွေးပေါင်ကျတာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက် နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မိုက်ခနဲဖြစ်သွားခြင်း၊သတိလစ်ခြင်းတွေကိုပါ ကြောက်ရတာမို့မတ်တပ်ထတဲ့အခါ ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲထပါ။
ကလေးတွေအတွက် Iloprost ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Iloprost ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့်အချိုးအစားများဖြင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Iloprost ကို သောက်သုံးဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇွန် 21, 2019
Iloprost Solution For Nebulization. https://www.webmd.com/drugs/2/drug-92525/iloprost-inhalation/details. Accessed February 22, 2018.
Iloprost Dosage. https://www.drugs.com/dosage/iloprost.html. Accessed February 22, 2018.
သွေးတိုးတက်စေနိုင်တဲ့ လက်နက်ပုန်းတွေ သင်သတိထားမိရဲ့လား